Zvakanakira Kuita Basa Rekupa | Martech Zone
Zvakanakira Kuita Basa Rekubatsira
Chipiri, February 1, 2011 Chipiri, February 1, 2011 Douglas Karr
Vamwe vanhu vanomhanya neimwe nzira kana vakumbirwa kuita basa rerudo. Hapana munhu anoda kupedza masikati, zuva, kana kupera kwevhiki kure nezvavanosiita mazuva ese. Ivo vangave vakabatikana zvakanyanya, kana havangodi kupa nguva kune chimwe chinhu chisiri kuzovabatsira neimwe nzira. Kungoti nekuti hausi kubhadharirwa basa rauri kuita, hazvireve kuti hapana mabhenefiti.
Mavhiki mashoma apfuura, ndakapedza maawa makumi mana nemasere, neboka revamwe, tichivaka webhusaiti yakazara-inoshanda yesangano risingabatsiri. Chiitiko ichi chaidaidzwa Refresh Weekend uye chakarongedzwa naJustin Harter. Kupera kwevhiki, zvipo zvina zvakasiyana zvakapihwa mawebhusaiti anotyisa anoenderana zvakakwana nemasangano ega ega
Kunyangwe ini ndisina kubhadharwa iwo maawa makumi mana nemasere, heino mabatiro andakaita kubatsirwa nechiitiko ichi:
Uber Networking - Ndakasangana nevakagadziri vazhinji, vagadziri, nevanyori vevhidhiyo ku Refresh Weekend. Mumwe nemumwe wavo aive nehunyanzvi hwakasiyana hwavakaunza patafura. Zvese izvo zviripo uye zvine chekuita neindasitiri yandinoshanda mairi. Kwete chete ini ndakanzwa vanhu ava vachitaura nezvezvavanoitira raramo, asi ndakakwanisa kuvaona vachifamba hurukuro. Iye zvino ndine vimbiso yekuti vanhu ava vanoziva zvavari kuita. Iri bhenefiti chete harishandisike.
Kickback - Pese panowanikwa rubatsiro rwakakura, panowanzove nepepanhau kana chiziviso cherimwe rudzi. Mune imwe kudonha swoop, zita rako riri kuzivikanwa uye basa rako riri kuratidzwa. Chikamu chakanakisa nezve kickback kubva kune charity ndechekuti ingangove iri kuuya kubva kune vateereri vausingakwanise kusvika kare. Nekusarudza kubatsira rubatsiro, zvinokwanisika kuti iwe uwane vateereri kune iwo anobatsira network.
Iyo Inongonzwa Kunaka - Ini ndinowana kunzwa kwechokwadi kunotyisa kana ndikabatsira mumwe munhu anokodzera zvechokwadi. Ini ndinoona kunzwa uku kwakaoma kuwana. Zvirinani pane kuona vadiwa vako vachivhura zvipo zvawakavatengera mangwanani eKisimusi. Nyika yaizove yakaoma zvakanyanya pasina rudo uye kupa. Iwe unogona kunge usiri kuwana muhoro webasa rako, asi kuchine zvimwe zvakanaka zvaunowana kubva mukuita kudaro.
Amazon Nyore Email Service - SMTP Mugore
Geotoko: Multi-Platform Nzvimbo-Yakavakirwa Campaigns
Kukadzi 1, 2011 na3: 00 PM
Tose ndinobvumirana, Stefano, uye ndinodada chaizvo kuti iwe uri chikamu che DK New Media uye kubatsira nemapurojekiti akadai. Ini ndinowedzera kuti kune mikana mikuru yebhizimusi nemasangano anobatsirawo - vatungamiriri vebhizinesi vanowanzo batana nemakambani avanoziva kuti anobatsira.
Apr 5, 2011 pa 1: 16 PM
Ini ndakanyatsotora chikamu katatu ndichiita basa rekuzvipira kune mamwe mabhenefiti andisingade kutaura mazita. Kunzwa kwacho kwakajairika uye kunogutsa zvakanyanya. Iko hakuna mari ipapo uye iwe haufanire kutarisira pakutanga. Izvo zvakakosha iwe unokwanisa kutora chikamu nekuti havazi vese vanogona kuzviita uye vanogona kuzviziva. Kana iwe uchida kuve unobudirira kune vamwe wadii kushandisa imwe nguva uchiita basa rerudo.